के मास्क धोएर लाउन मिल्छ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ? — Harpraharnews.com
८ भाद्र २०७७, सोमबार Bhumika Subba
झापा । कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने सायद अहिलेसम्म सबैले बुझिसके। तर, मास्क कसरी लगाउने र कस्तो लगाउने भन्नेमा धेरैलाई अन्यौल नै देखिन्छ।
सबभन्दा ठूलो अन्यौल त एन–९५ मास्कले ल्यायो।
सुरूका दिनमा भल्भ भएको एन–९५ मास्क सुरक्षित हुन्छ भनेर धेरैले त्यस्तै लगाए। पछिल्लो समय भने त्यो मास्क कोरोना संक्रमण रोक्न भरपर्दो मानिएन। त्यसले मास्क लगाउने व्यक्ति सुरक्षित रहे पनि ऊ संक्रमित छ भने अरूलाई सुरक्षा नगर्ने कुरा सार्वजनिक भयो। कतिपय व्यक्तिले भित्र सर्जिकल मास्क लगाएर बाहिर एन–९५ लगाएको पनि देखियो।
हामीकहाँ सर्जिकल मास्क वा एन–९५ मास्क दुई–तीन दिन लगातार लगाउने र धोएर फेरि प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। के यस्तो गर्नु राम्रो हो?
यति मात्र होइन, कपडाको मास्क लगाउनु ठिक हो कि होइन र आफूलाई संक्रमण नभए पनि मास्क लगाएर हिँड्न किन जरुरी छ भन्ने अन्यौल पनि हामीकहाँ उत्तिकै छ?
यिनै प्रश्न र जिज्ञासाबारे सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले केही दिनअघि सांसद गगन थापासँगको फेसबुक संवादमा जवाफ दिएका छन्।
सबभन्दा पहिला एन–९५ मास्कको कुरा गरौं।
डा. सुवेदीका अनुसार भल्भ भएको एन–९५ मास्कले बाहिरबाट भित्र जाने हावा त रोक्छ, तर भित्रबाट बाहिर आउने हावा रोक्दैन।
‘हामीले सास फेर्दा, खोक्दा वा हाच्छियूँ गर्दा थुकको छिटा बाहिर नजाओस् भनेर मास्क लगाउने हो। तर, भल्भ भएको एन–९५ मास्कले त्यस्तो छिटा बाहिर जानबाट रोक्दैन। यसले बाहिरको छिटा भित्र प्रवेश गर्न भने दिँदैन,’ उनले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापासँगको कुराकानीमा भने।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि संक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने हुँदा यस्तो मास्क लगाउनु ‘सामाजिक रूपमा अनुत्तरदायी व्यवहार’ भएको डा. सुवेदीले बताए।
‘कतिपय मान्छेले एन–९५ भित्र छुट्टै सर्जिकल मास्क पनि लगाउन थाल्नुभएको छ। तर, सर्जिकल मास्क लगाएपछि अर्को लगाउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मास्क लगाउँदा कत्तिको टाइट फिटिङ छ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ। माथि, तल वा छेउछाउबाट हावा छिर्ने गरी खुकुलो छ भने त्यसले संक्रमणबाट बचाउन सक्दैन।’
यस्तो अवस्थामा कपडा राखेर, टेप लगाएर वा अन्य तरिकाबाट मास्कलाई टाइट फिटिङ गराउनुपर्ने उनले सुझाए।
‘मास्क धोएर फेरि–फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?’ सांसद थापाको यो प्रश्नमा डा. सुवेदीले प्रस्टसँग भने, ‘एन–९५ र सर्जिकल मास्क धुन मिल्दैन।’
उनले अगाडि भने, ‘यस्तो मास्क धोएपछि त्यसको छिद्रहरूमा रहेको कपडा बिग्रन्छ। भाइरस सजिलै छिर्न सक्छ।’
धुन नमिल्ने भए के आज लगाएको मास्क भोलि पनि लगाउन मिल्छ त?
त्यो पनि मिल्दैन।
त्यसैले त्यो मास्क भोलिपल्ट फेरि प्रयोग गर्नु त परको कुरा, त्यसको बाहिरी पत्र हातले छुन पनि हुँदैन। कसैगरी छोइहाल्यो भने हात साबुनपानीले धुनुपर्छ वा स्यानिटाइजर लगाइहाल्नुपर्छ।
धुन पनि नमिल्ने, भोलिपल्ट फेरि लगाउन पनि नमिल्ने भए के अब हरेक दिन नयाँ मास्क किनेर लगाउनु? त्यो त कसरी साध्धे होला र?
यसमा डा. सुवेदीको जवाफ छ, ‘धुन नमिले पनि मास्क पुनः प्रयोग गर्ने तरिका छ। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू आज एउटा मास्क लगाउँछौं। त्यसलाई खोलेर कोठामा अलक्क कतै झुन्ड्याएर राख्छौं। भोलि फेरि अर्को लगाउँछौं। त्यसलाई पनि उसैगरी झुन्ड्याएर राख्छौं। यसरी चार दिनसम्म हामी चारवटा छुट्टाछुट्टै मास्क लगाउँछौं।’
उनले अगाडि भने, ‘पाँचौं दिनमा म पहिलो दिन लगाएको मास्क लगाउँछु। यसको कारण के भने, पहिलो दिन लगाएको मास्कको बाहिरी पत्रमा भाइरस परेको छ भने पनि त्यो ७२ देखि ९६ घन्टासम्म मरिसकेको हुन्छ। पहिलो दिन लगाएको मास्क चार दिनपछि फेरि लगाउँदा सुरक्षित हुन्छ। र, यसरी हामी मास्क नधोइकन पनि पुनः प्रयोग गर्न सक्छौं।’
यसबीच मास्क च्यात्तियो, प्वाल पर्‍यो वा मैलियो भने त्यसलाई सिलाउने वा टाल्ने होइन, बरू फेरिहाल्नुपर्छ। सिलाएको, टालेको मास्कले पनि हामीलाई भाइरसबाट जोगाउँदैन।
सँगसँगै, आफूले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा थुकका छिटाले मास्कको भित्री भाग भिजेको छ भने पनि अर्को फेरिहाल्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
पछिल्लो समय विदेशतिर र नेपालमा पनि कपडाको मास्क सिलाएर लगाउने चलन बढेको छ। केही नेपाली व्यवसायीले पनि कपडाको मास्क बनाएर बेच्न थालेका छन्।
मास्क बनाउँदा दुई खालका कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ। कटन र फलाटिनका कपडा बढी प्रचलित छन्। यसरी दुई किसिमका कपडाको पत्र राखेर बनाइएको मास्क सुरक्षित हुने डा. सुवेदीले जानकारी दिए।
‘कपडाको मास्क धुन मिल्छ। धुँदा त्यसको फेब्रिक बिग्रँदैन,’ उनले भने, ‘मास्कमा दुई किसिमका कपडाको पत्र प्रयोग भएको छ भने त्यसले एक किसिमको बिजुलीको तरंग पैदा गर्छ। त्यस्तो मास्कको बीचको तहमा बिजुली हुन्छ, जसले भाइरस छिर्न दिँदैन। यस्तो मास्क एन–९५ जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ।’
मान्छेले आफूलाई लक्षण नदेखिएको भए पनि मास्क लगाउन किन जरूरी छ भनेर उनले चर्चा गरेका छन्।
श्वासप्रश्वासका क्रममा मान्छेको नाक–मुखबाट निस्कने थुकका छिटाहरूबाटै यो भाइरस सर्ने हुँदा मास्क लगाउनु जरुरी भएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार, अर्को मान्छेले खोकेको वा बोलेको बेला मुखबाट निस्कने छिटाबाट जोगिन मात्र मास्क लगाउने होइन। त्यसो गर्दा थोरै मान्छेले मात्र मास्क लगाउँछन्।
‘यसरी थोरै मान्छेले मात्र लगाउँदा संक्रमणको लक्षण नभएका मान्छे मास्क नलगाई हिँड्छन्। लक्षण नभएका मान्छेलाई आफू संक्रमित भएको थाहा हुँदैन। उसले सास फेर्दा निस्कने छिटाबाट अरूलाई रोग सर्छ। त्यसैले, मास्क सबैले लगाउनुपर्छ। आफूलाई संक्रमणको कुनै लक्षण छैन भने पनि मास्क लगाएर हिँड्ने बानीले यो रोग सर्न पाउँदैन,’ उनले भने।
सबैले सर्जिकल मास्क, एन–९५ मास्क वा दुई–तीन तहको कपडाको मास्क लगाएर हिँड्यौं र सही ढंगले लगायौं भने कोरोना भाइरसको महामारी आफैं नियन्त्रण हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए।
यसको व्यवहारिक प्रयोग जापानको अनुभवले देखाएको उनले उदाहरण दिए।
‘जापानको जनसंख्यामा वृद्धहरूको अनुपात बढी छ। तै पनि त्यहाँ लकडाउन गरिएन। अरू देशको तुलनामा त्यहाँ मृत्युदर र संक्रमण दर पनि कम छ। जापानमा सबैले मास्क लगाएर हिँड्नु नै यसको एउटा मुख्य कारण हो,’ उनले भने।
उनले अगाडि भने, ‘मास्क लगाउनु भनेको आफू जोगिन मात्र होइन, अरूलाई जोगाउन पनि हो। आफूलाई खोकी लागिरहेको छ वा कुनै किसिमको रोग छ, तर मास्क लगाएको छैन भने अरूको निम्ति अभद्र वा गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको ठानिन्छ। यो जापानको सामाजिक मान्यता नै हो। यसले जापानमा लक्षण नभएका मान्छेबाट रोग सर्न पाउँदैन। त्यसले समुदायमा संक्रमण एकदमै नियन्त्रणमा छ।’
डा. सुवेदीको कुरा सुनेर तपाईंले पनि मास्क लगाउने तरिका थाहा पाउनुभयो होला? कतै तपाईंहरू पनि सर्जिकल मास्क वा एन–९५ मास्क धोएर त लाइरहनुभएको थिएन?
वा, हरेक दिन एउटै मास्क लगाइरहनुभएको थियो कि? त्यसो गर्नुभएको थियो भने डा. सुवेदीको सुझाव अमल गर्नुस् है।
( सेतोपाटीबाट साभार )
पूर्व प्रेस चौतारीको पत्रकार उपचार कोषबाट ४ जना पत्रकारलाई सहयोग हस्तान्तरण
गायिका जुनु राई र हेमन गुरुङको आवाजमा रहेको गीत “दोंग्देमुन् बजार ” सार्वजनिक